यी हुन् कांग्रेस महाधिवेशनमा लुम्बिनी प्रदेशबाट उम्मेदवार बन्न चाहनेहरू :: सेतोपाटी संवाददाता :: Setopati
बुटवल, मंसिर २१
नेपाली कांग्रेसको १४ औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको मुखमा लुम्बिनी प्रदेशका कांग्रेस नेताहरूमा उम्मेदवारी घोषणा गर्ने लहर सुरू भएको छ।
लुम्बिनी प्रदेशमा सक्रिय राजनीति गरेका मात्रै होइन, राजधानीमै रहेर जिल्ला पार्टी सञ्चालन गर्नेहरूले पदाधिकारी एवम् केन्द्रीय सदस्यमा आकांक्षा राखेका छन्।
वडा, पालिका, निर्वाचन क्षेत्र, जिल्ला हुँदै प्रदेश अधिवेशनसमेत सम्पन्न भएको लुम्बिनी प्रदेशमा प्रदेशका १२ जिल्लाका नेताहरू केन्द्रीय समितिमा उम्मेदवारीका लागि नेताहरूसँग ‘लबिङ’ गरिरहेका छन्।
यी तीन वटै ठाउँबाट सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको अलग-अलग समूह बनाएर लडेका प्रदेशका नेताहरू केन्द्रीय समितिमा आ-आफ्नो समूहमा दाबी गरिरहेका छन्।
लुम्बिनी प्रदेशमा देउवा समूहभन्दा पौडेल समूह बलियो देखिएपछि त्यो समूहका आकांक्षीहरूको संख्या बढी छ। प्रदेश सभापतिमा पौडेल पक्षका अमरबहादुर पुन विजयी भएका छन्।
महामन्त्रीमा रूपन्देहीका सांसद एवम् गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणको नाम चर्चामा छ।
देउवाका विश्वास पात्र मानिने खाण महामन्त्रीमा उम्मेदवारी दिने तयारी गरिरहँदा प्रदेशमा सभापति जिताउन नसकेको आरोप लागेर समस्यामा छन्। संस्थापन समूहका बलिया मानिने खाण यो प्रदेशबाट महामन्त्रीमा एक्ला दाबेदार छन्।
उपसभापतिमा गुल्मीका चन्द्र भण्डारीले आफ्नो उम्मेदवारी सार्वजनिक गरेका छन्।
दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा एमाले नेता प्रदीप ज्ञवालीलाई हराएर चर्चामा आएका भण्डारी २०७४ सालमा भएको आम निर्वाचनमा भने ज्ञवालीसँग २ हजार ७ सय मतान्तरले पराजित भएका थिए।
भण्डारीले वरिष्ठ नेताहरूलाई अघि सारेर आफू उपसभापतिमा उम्मेदवारी दिन लागेको बताएका छन्।
त्यस्तै, सहमहामन्त्रीमा पश्चिम नवलपरासीका देवेन्द्रराज कँडेलले आकांक्षा देखाएका छन्। जिल्ला कांग्रेसभित्रै विवाद र गुट उपगुट बनाएर चलाइरहने पूर्वगृहराज्यमन्त्री कँडेल देउवा पक्षका हुन्।
यता, पौडेल समूहबाट दाङका दीपक गिरीले पनि सहमहामन्त्रीमा उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन्।
केन्द्रीय सदस्यमा रुपन्देहीबाट देउवाका विश्वास पात्रसमेत रहेका कांग्रेस निवर्तमान सभापति अब्दुल रज्जाकले उम्मेदवारी दिने तयारी गरेका छन्।
रज्जाक र संविधानसभा सदस्य मोहम्मद इस्तियाक अहमद खानले मुस्लिम कोटाबाट केन्द्रीय सदस्य पदमा उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन्।
त्यस्तै, रूपन्देही क्षेत्र नं. ४ का प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रमोद यादव, महिला नेतृ रिता सेन र जमुना ढकालको नाम चर्चामा छ। सेन र यादव पौडेल पक्षका हुन् भने ढकाल संस्थापन पक्षकी हुन्।
लुम्बिनी प्रदेशका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री समेत रहेका पाल्पाका वीरबहादुर रानाले पनि केन्द्रीय सदस्यमा उम्मेदवारी दिने भएका छन्।
रानाले आदिवासी जनजाति तर्फबाट केन्द्रीय सदस्यमा उम्मेदवारी दिने बताए।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष एवम् राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका सिइओ समेत भइसकेका प्यूठानका प्रा.डा. गोविन्द पोखरेल केन्द्रीय सदस्य हुन चाहेका छन्। पोखरेल कांग्रेसको १३ औं महाधिवेशनमा सदस्यमा पराजित भएका थिए।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा पर्यटन, ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्री दाङका डिल्ली चौधरीले पनि केन्द्रीय सदस्यमा उम्मेदवारी दिने तयारी गरेका छन्। उनी सभापति देउवाका निकटस्थ हुन्।
बर्दियाबाट देउवा समूहका किशोरसिंह राठौर र पौडेल समूहका सञ्जय गौतम केन्द्रीय सदस्यमा उठ्न खोजेका छन्।
त्यस्तै, बाँकेका किरण कोइराला र सुरेन्द्र हमाल केन्द्रीय सदस्यमा उम्मेदवारी दिने तयारीमा छन्। पौडेल कोइराला र हमाल देउवा पक्षका हुन्।
अर्घाखाँचीबाट केन्द्रीय सदस्यका आकांक्षीको संख्या सबैभन्दा धेरै छ। सन्धिखर्क नगरपालिकाका प्रमुख कमल भुसाल, महिला नेतृ पुष्पा भुसाल, डा. रामबहादुर बिसी, मानबहादुर बिक, मुक्ति श्रेष्ठ, रेवती भुसाल लगायत अर्घाखाँचीबाट आकांक्षी छन्।
गुल्मीबाट केन्द्रीय सदस्यमा देउवा पक्षबाट चन्द्र केसी र पौडेल पक्षबाट त्रिलोकप्रताप सेनको नाम चर्चामा छ।
कपिलवस्तुका वीरेन्द्र कनौडिया, अक्तर कलाम देउवा समूहबाट केन्द्रीय सदस्यका आकांक्षी छन्। रोल्पाबाट पौडेल पक्षका मनोजमणि आचार्यको नाम चर्चामा छ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, मंसिर २१, २०७८, ०९:४०:००